Smartphone Sony ST26i Xperia J - umshini, okungase kwenziwe ukuze esezingeni eliphakathi nendawo. Ngokusho kochwepheshe abaningi, lokhu imodeli akuhloselwe zuku wokuba umholi yokuthengisa. Nokho, kulindeleke ukuthi smartphone uzothola umthengi ingxenye wobusha zobuchwepheshe, kanye nalabo bantu abenza ngokwesiko kubhekwe yena umsekeli sha-Sony.
Telephone-Sony ST26i Xperia J owaziwa ochwepheshe abaningi isibonelo ama-apharathasi, olinganiselayo ngokuya ukusebenza nebhethri imithombo. Ngokusho kwezazi ezithile, lokhu kuwumkhuba okungaba usizo evamile, lapho igajethi sha ekhiqizwa kunciphisa ngamabomu amandla ezinye izingxenye hardware esivuna nempilo yebhethri ende. Kukhona mqondo wokuthi Sony inkampani ihambelana nemithetho umqondo. Ingabe kunjalo ngempela? Yiziphi izici eziphawulekayo futhi izinzuzo main ukuncintisana smartphone uye Sony Xperia J ST26i? Yiziphi izinzuzo ezisobala kakhulu nemibi kule divayisi? Ingabe idivayisi kokuxazulula, lapho izimbangi akudingeki?
izakhi Basic umzimba smartphone kukhona sasivumela ejwayelekile. The main touch okhiye - ngqo ngezansi kwesikrini, phezu kwawo - ikhamera yesibili, izwi isikhulumi, kanye inzwa motion (isilinganiselo). Phela, ezivamile amafoni eziningi smart ukukhanyisa inzwa sishoda. Ohlangothini kwesokunxele umzimba - slot-micro-USB. Ngakwesokudla - ukhiye ulawula ezingeni umsindo, eziningi - inkinobho kudivayisi amandla yokuvala isikrini. Top - jack audio, phansi - i-microphone. Engemuva - ikhamera main ne LED-flash. Uma uphakamisa ikhava emuva ke ukubukisisa ukuvula nezixhumi kwebhethri-SIM khadi kanye micro-SD.
Ochwepheshe abaningi abahlola kudivayisi, thola izixazululo brand omuhle kakhulu. Ofanayo ubuke imiphumela in a inqwaba abasebenzisi abashiya mayelana Sony ST26i Xperia Izibuyekezo J. Phakathi kwalabo bheka kwifoni umangale - hhayi kuphela abalandeli sha, kodwa futhi labo abanquma kulokho ukuze uthole ifoni yalesi brand okokuqala. Futhi ngokuyinhloko ngenxa Ngithande umklamo. Umbala izixazululo brand ukunikela impela eningi. Abantu babe isitayela ezahlukene, kukhona inala ongakhetha kuzo. Ngokwesibonelo, labo abasondelene okukhulu futhi conservatism, kuya esilindele imodeli uzoba umzimba abamnyama (ie Sony Xperia J ST26i Black).
Smartphone has a screen-4 intshi isinqumo 854 x 480 pixels. Ukuze usebenzise izici eziningi zale divayisi ngokuphambeneyo, ochwepheshe bathi, kwanele. Nokho, njengoba kuphawulwe Ochwepheshe abathile enkulu ekwakhekeni kwesikrini elisetshenziswayo akulona ubuchwepheshe eziningi zalezi zinsuku, kungani kungaba nzima ukubukeza izithombe engele okusezingeni eliphezulu.
Kukhona esiphikisayo agumenti ku lokhu okwashiwo yile ndoda, okusekelwe phezu kwesisekelo sokuthi ukuvulwa kudivayisi - ingxenye intengo, lapho izinga ithatha eliphezulu isibonisi-Sony ST26i Xperia J ukukhuluma akayena ngempela ezifanele. Matrix Screen isekela "multitouch", siqaphela kuze kube kuthintwa ezimbili kanyekanye.
Umkhiqizi ukufakwa amandla smart ibhethri zefoni ayizinkulungwane 1.7. Mah. Nokho, kubonakala sengathi obuncani, njengoba ochwepheshe uqaphele, ukukhethwa izingxenye hardware smartphone ukuthi ukusetshenziswa amandla efoni uphansi. Ngisho ngefoni asebenzayo kakhulu ukusebenza njengombuso ochwepheshe wathola ukuhlola imishini, ibhethri inikeza kufika ezinsukwini ezimbili ukuphila kwebhetri. Lesi sibalo kuyoba esingaphansi kuphela kulezo zimo lapho ifoni isebenza kuphela imodi media player. Kodwa ngisho Kulokhu, impilo yebhethri izohlala ehloniphekile - amahora angaba ngu-20-25.
Amalungu owashiya mayelana Sony ST26i Xperia Izibuyekezo J, uzikhiphe ohlwini ukusebenza impilo yebhethri ngendlela efanayo. Abanye abanikazi izinkomba babe smartphone kancane ephakeme kunaleyo izuzwe ochwepheshe, kuyilapho abanye - ngenhla (umehluko kungenzeka kubangelwa lizinga "Samandla" amabhethri, kanye khona izinhlelo third-party isizinda). Ngakho sithola isiqinisekiso engaqondile lizwakalise izibikezelo lochwepheshe kuqala phakathi komsebenzi kanye ukuphila kwebhetri. It kuvela ukuthi abaluleke kakhulu - kusukela iphuzu Ngenxa umthengi - Sony Xperia J ST26i izici - akusiyo neze umthwalo kuphela amandla 'nensimbi' futhi ukukhanya kwesikrini kuphela, kodwa futhi ibhethri. Abantu namanje bayakwazisa kuphela "wamkhohlisa 'amadivayisi hhayi ephathekayo, kodwa futhi izakhiwo cishe izinto eziwusizo, njengokuthi impilo yebhethri.
Futhi manje 'nensimbi'.
Imisebenzi kudivayisi esekelwe MSM 7227a chipset (SOC version). Lokhu chipset inikeza izinga ezinhle idivayisi imisebenzi eyisisekelo. Kukhona isiqophi chipset Adreno 200, okuyinto amandla ngokwanele ukusebenzisa eningi imidlalo nezinhlelo zokusebenza. kuphakama izinkinga uma kuphela ukuzama ukusebenzisa "ezisinda" kangaka 3D-imidlalo (kodwa mangisho ukuthi kuncane kakhulu lokhu amafoni ekilasini uzokwazi ukubhekana ngokuphumelelayo lo msebenzi). Smartphone has 512 MB RAM, futhi lokhu futhi esanele imisebenzi eyisisekelo. Ochwepheshe abaningi bathi: umenzi eyafakwa ifoni Sony Xperia J ST26i izici amandla processor wememori ziyavumelana ezamukelwayo ingxenye yezinto zobuchwepheshe ongaphakeme-ontengo yakhe yayinqunyiwe. Ungakhohlwa ngale ndlela ngemfundiso yokuziphendukela okushiwo yilabo ababezibiza ngongoti ngenhla, eziphathelene ukonga ibhetri ngokunciphisa ukukhiqiza idivayisi ngezithukuthuku ukuncintisana kule ingxenye.
Smartphone isekela ekuxhumekeni okungenantambo ngokusebenzisa i-Wi-Fi. izinga Connection, ukuzinza, isivinini akubangi izikhalazo ezivela ochwepheshe. Ingabe umsebenzi "indawo yokungena" (lapho ifoni ingaba njengesihluthulelo-Wi-Fi-router). Kukhona usekelo indinganiso Bluetooth version 2, esihlinzeka izinga idatha ye mayelana 1 Mbit / s: ukudluliswa encane isithombe, imisindo yefoni, izinhlelo, kuyinto ehluke efanelekayo. Kukhona futhi wire esibonakalayo - USB.
Njengoba singabona, enesixhumanisi ocingweni kulungile. Libuye uzinake nokuhlolwa omuhle wezazi ngokuya ukuzinza uxhumano olungenantambo phakathi smartphone yakho namanye amadivayisi. Ikhwalithi efanayo kuqinisekiswa abasebenzisi eziningi ukubuyekezwa kwawo. Isebenza kahle, njengoba ochwepheshe, futhi umsebenzi oyisisekelo ifoni - zokuxhumana ngezwi nge GSM-iziteshi.
Telephone-Sony ST26i Xperia J ikhamera ifakwe isixazululo ezinhle 5 megapixel. Kukhona autofocus. Ochwepheshe uqaphele lula kokusebenzisa esibonakalayo ikhamera: ekuskrini ubonisa zonke izici okudingayo. Ngosizo touch okhiye olulodwa, ungabiza imenyu Ukukhetha, ezihlukahlukene amathuba ezinhlelweni ukuze uthwebule izilungiselelo ikhamera zwi lesinqumo, isivinini yokushutha, ibhalansi elimhlophe, flash futhi isibali esizikalayo, kusebenze imodi self-portrait, smile ukuthola umsebenzi.
Ikhwalithi izithombe futhi yenza ukuhlolwa omuhle wezazi. Ungarekhoda amavidiyo ngokulungiswa of 640 ngu-480 wamaphikiseli. Ama-roller sasivumela Ngokwesilinganiso, ngokusho kongoti, ikhwalithi (Nokho, ngokushesha kanye ukubhuka - lo msebenzi angeke kubhekwe ejwayelekile Smartphones kule ingxenye).
Smartphone ilawulwa Android OS version ICS, kubhekwa uchwepheshe okwanele ukusebenza kanye nokusebenza imvelo yokusebenza, isihambile ku inqwaba nemingcele isofthiwe kumadivayisi abaningi ukuncintisana brand. Ngaphezu kwalokho, idivayisi (kanye nanoma yimaphi amanye iselula Sony Xperia) ifakwe inani elikhulu izicelo olufakwe. Phakathi izibonelo olugqamile labo ukusebenza kakhulu - Uhlelo ukusebenza ngekhamera kuchaziwe ngenhla.
Ucingo ezikhishwe kudala - ngo-2012. Kuze kube manje, lo ICS Android for Sony Xperia J ST26i - firmware kungesilo kuphela. Kukhona imithombo eminingi kangaka kuyiphi OS zanamuhla ingalandwa kusukela izici ezintsha kanye namakhono.
Njengoba nje kunjalo nabanye Android kudivayisi yakho, umnikazi we-Xperia J ingalandwa futhi efakwe ngaphandle nobunzima kuzinhlelo zokusebenza smartphone nemidlalo kusuka ku-Google Play nezinye zemibhalo. Ungase futhi ulayishe amafayela ngokusebenzisa izinhlelo etholakalayo zokuxhumana interface.
Smartphone has a esibonakalayo omuhle, design nice futhi isakhiwo okunethezekile izilawuli.
Ochwepheshe uqaphele high imisebenzi eyisisekelo ifoni. Ukuxhumana kuzo zonke amazinga kugcinwa kakhulu, umsindo bha. Lodumo esihle quality Yakha izindlu. Ngokusho kochwepheshe, lolu phiko izokwengeza sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe Sony brand sika jikelele ezimakethe zomhlaba yezinto zobuchwepheshe mobile.
A amaphuzu anamandla kakhulu esivuna kukhethwa smartphone, ochwepheshe bathi - a nempilo yebhethri ende. Ngokuqhathaniswa izimbangi kule ipharamitha idivayisi - omunye wabaholi. Kukhona inguqulo ukuze kuzuzwe ukusebenza umxhwele kulesi sici, Sony wakhetha ukufaka ku-smartphone yakho ayiwavezi esimanjemanje kakhulu hhayi processor beyithela khulu kanye ihluzo iyunithi ngamabomu. Njengoba umcabango, mhlawumbe, yabamakethi ukukhomba abasebenzisi ucingo chipset enamandla nemidlalo ye-3D ekwaziyo uzoba isici yesibili kuqhathaniswa isikhathi ukuphila kwebhetri.
Ngaphandle nje kokuthi impilo yebhethri ende, izinzuzo ocacile smartphone ochwepheshe shayela i ukubukeka ekhangayo, khona LED-kwasemuva, ukwakha izinga nezindwangu zezingubo kunjalo, ukusebenza okuhle lapho esebenzelana imisebenzi evamile, ikhamera ezinhle. Phakathi sobala (kodwa hhayi ezibucayi, esekelwe ingxenye ethize) sintula - Okuqukethwe akuzwakali amavidiyo izinga kanye lemali elincane RAM.
What do abanikazi smartphone? Ngokuvamile imizwelo omuhle. Abasebenzisi abaningi kakhulu ukwabelana imibono izazi 'phezu Inzuzo enkulu kudivayisi, ukuqaphela kuye khona nebubi ezashiwo ochwepheshe. Phakathi izici ezinhle smartphone, bekulokhu abasebenzisi matasa ka imakwe, ngokuthi isikhathi ukuphila kwebhetri.
Abanikazi abaningi Sony Xperia J ST26i intengo idivayisi isibe ngenye yezinto ezibaluleke kakhulu ngemuva ukukhetha lapho uthenga. Kuyinto yamukeleka bathi izindleko idivayisi kuyinto ngempela yeningi: kungenzeka ukuthola ezitolo intanethi, lapho smartphone izobiza akukho ruble abangaphezu kuka-7 ayizinkulungwane ..
Abasebenzisi abaningi baye babika, kanye nochwepheshe, kakhulu kudivayisi design, ubone efonini muhle kakhulu, hhayi eqolo kule isikhumbuzo. Lokhu kuyaqondakala: into yokuqala banake pha - ukubukeka (futhi ukusebenza ke, cishe, futhi akazange ababukele). Kuyinto njalo engenzeka ukuthola isethi ephelele ne oyifunayo umbala umthunzi. It is "Isipho" izobukeka smartphone emhlophe (ie, inguqulo-Sony ST26i Xperia J mbala omhlophe). Ngokuya sobuhle bayo, amafomu kanye ukuhambelana abo idivayisi yombala ufanelwe, ochwepheshe kanye nabasebenzisi, isilinganiso esiphezulu.
Firmware nge odin. ifoni Imiyalelo flash "Samsung" ngu Odin
Luka sanitary metal: Ubukhulu, izici isicelo